Ma Wanaagsantahay In Aad Mar Walbo Ahaato Qof Wanaagsan? | Xaqiiqonews
Dadka badankood waa ay ku jeclaan doonaan marka aad tahay “qof wanaagsan” laakiin xisaabta ku darsa mararka qaar in aad noqoto qof wanaagsan waxa ay kuu geysan kartaa dhaawac ka badan inta ay ku caawisay.
Waxa aan isku dayi doonaan in aan aqristayaasha la wadaago sifada ah in aad tahay”qof aad u wanaagsan” iyo sida ay saameyn ugu yeelato dhinacyada kala duwan ee noolasha: shaqadaada, xiriirada aad la leedahay dadka kale, shukaansigaada iwm.
Daacad marka aan u hadlo markii ugu horeeyey ee aan wax ka barto “wanaagga” iyo sida noolasheyda uu u saameeyey waxa aheyd markii aan dareemay Wanaageyga in uu iga fogeeyey xiriirka aan la lahaa dadka kale gaar ahaan dumarka.
Waxa aan Google-ka ka baaray sababta “Qofka wanaagsan”, qofka wanaagsan waxa aan ula jeeda in aad iyo aad u ixtiraamto dadka kale,, in aad faraxadooda ka shaqeyso(inta ay mudan yihiin in ka badan), waxaan baaray “dumarka miyey jecelyihiin ninka wanaagsan”.
Hase ahaatee natiijada waxa ay noqotay in aan arkay qoraalo badan oo laga qoray sababta dumarka u jecelyihiin ragga xun; si kastaba safarkeyga su’aal weydiinta ayaan si watay waxa aan weydiiyey: ma wanaagsan tahay in aan mar walbo ahaada qof wanaagsan? waxyaabahii aan ka soo aqriyey iyo khibradeydaba halkani ayaan idinkula wadaagi doonaa.
Dadku Waa Sida Caruurta!
Qoraal ciwaankiisu ahaa “9 waxyaabood oo xun xun oo laga dhaxlo wanaagga badan” kaasi oo lagu daabacay webseetka “Lifehack” ayaa qoraagga waxa aan ku raacsanahay qodobka koowaad ee uu leeyahay “Dadka hadii aad wax siiso, waxa ay kaa sugayaan in aad mar walbo siiso”.
Malaheyga waxa aad is leedahay “maxaa ku jaban in qofka mar walbo aad wax siiso” dabcan waxba kuma jabna , laakiin marka ay dadku kaa bartaan dabeecad aad u wanaagsan, waa ay kaa filanayaan mar walbo, waxayna ila tahay mar walbo ma noqon kartid qof wanaagsan, sababtoo ah waxaan nahay bani’aadam.
Wanaagga Badan Waa Nifaaq
Qiimo walbo oo ay ku kacdo “runta waa muhiim” , aniga qof ahaan markii aan ahaa qof wanaag badan, ma aheyn malag laakiin waxa aan dadka ka qarin jiray qalbikeyga dhabta ah.
Kama wado qof walbo oo wanaagsan waa munaafaq, balse marar qaarkood dadka wanaagga muujiye ma ahan sida ay u u muuqdaan, xaaladdan oo kale marka la taagan yahay waa marka aysan habooneen in aad noqoto wof wanaagsan (sida qofka kale in uu kuu arko laga yaabo).
Kuuma soo jeedinaayo in aad noqoto qof xun oo dadka caawinin, gacan siinin iwm, u jeedkeyga waxa waaye oo kaliya in aan kala garano waqtiga uu wanaageena na caawinaaya ama dadka kale uu caawinaayo iyo marka wanaagga aan sameynay uu dib noogu soo noqonaayo isaga oo sita midabka “xumaanta”.
Walwal iyo Caafimaaddarro
Sida ay aaminsan tahay dhaqtarka daaweeya cudurada nafsiga ah Allison Gervais, oraahda ah “dadku waxa ay i jeclaan doonaan oo kaliya marka aan wanaag u sameeyo” waa oraah ka tarjumeysa cudur maskaxeedka “Farxad Gelinta Dadka kale”.
Qofka oo kalmadahan noocan ah aaminsan waxa ay ku hogaamin karta cudurada nafsiga ee walwalka, istareeska iwm.
Qofka Wanaagsan Waa Caajis
Sida uu ku waramaayo webseetka “Bussiness insider” qof wanaagga badan marka la joogo shaqada waa qof boorin ah, waa fiicantahay qofka oo edeb lahaada balse dadka u ogolow in ay bartaan dabeecadaada dhabta ah.
Waan kugu celinayaa tani macnaheedu ma ahan xergaha gooso oo xumaan u muuji dadka, taladeyda waxa ay tahay mar walbo noqon qof “isku miisaaman”.
Wanaagga Badan Xiriirka dhaxdiisa
Marka hore waa in aan isla fahanaa in aan annagu aheyn “dad wanaagsan” laakiin waxaa nala soo baray in aan noqono “dad wanaagsan”, waxaa nala soo baray “dadka ha xumeynin, dadku ha ku oran waxa ay ka xanaaqayaan , dadka ula dhaqan sida aad jeceshahay in ay kuula dhaqmaan soo sax ma ahan.
Marka ay timaado “Wanaagga iyo xiriirka” kaliya kama hadlaayo shukaaniga mararka qaarkood lamaanayaasha arintan saameeyn ayey ku yeelataa, wanaagga badan waxa uu ka hortagaa in labada qof si hoos isku dhaxgalaan.
Wanaag badan dadku xiriir wadaagga ah waxa ay ku keeni kartaa “kala tag” iyo aamin la’aan qof walbo waxa uu ogyahay in aysan jirin qof wanaagsan mar walbo.
Qoraalkeyga marnaba xayiisiin uma aha “xumaanta”, kaliya waxaa muhiim ah in aad dib ugu labaato liiskaada oo dib isku weydiiso: maxaa xumaan la dhihi karaa, maxaana wanaag lagu tilmaami karaa, waxa aan halkani kaga hadlay waa qodobo dadka qaar wanaag u arkaan balse aan aheyn wanaag,macanaheyga wax walbo oo aad u aragto wanaag ma ahan wanaag, laakiin waa ay fiicantahay in la wanaagsanaado.